SIDA oo kulan wada tashi ugu yeertay soomaalida reer Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
SIDA oo kulan wada tashi ugu yeertay soomaalida reer Iswiidhen
La daabacay tisdag 20 augusti 2013 kl 15.04
Kulan ay maalintii isniintii isugu yeedhay ururrada soomaalida, hayadaha iyo shakhsiyaadka daneeya arrimmaha mucaawinnada Soomaaliya uu dalkani u fidiyo laanta hayadda SIDA u qaabilsan Soomaaliya ayaa looga arrinsadey sidii soomaalida qurba-joogta ah ee dalkan ku dhaqan looga qeyb gelin lahaa arrimmaha la xiriira dib u dhiska iyo hor-u-marinta Soomaaliya.
Haddaba ka soo qeeyb-galeyaashii kulanka mid ka mid ah Maxamed Jimcaale oo aannu wax ka weydiiney fikraddiisa la xiriirta kulankii hayadda SIDA isugu yeertay ururrada soomaalida iyo dadyoowga xiiseeya hoowlaha mucaawinnada dalkani u fidiyo Soomaaliya ayaa nooga warramay sida uu gebi ahaanba u arko kulanka maalintii isniintii 19-kii agoosto ka dhacay xarunta hayadda ee SIDA.
Soomaalidii kulanka ka qeyb-gashey ayey qaar badan oo ka mid ihi carrabka ku adkeeynayeen inaan mucaawinnada dalkani u fidiyo Soomaaliya aaney u gaarin si siman, iyadoona uu Maxamed Jimcaale sheegey inay ahayd arrin aan loo baahneyn in meesha la keeno. Inkasta oo soomaalida iswiidhishka ee dibadda ku dhaqani ka tarjumeyaan xaaladda dalkii hooyo ka jirta.
Dhallinyarada kulanka goob-joogga ka ahayd ayay ka mid ahayd gabar da’ yar oo aanu ugu magac-darney Caasha, iyadoo soo jeedisay dhaliil la xiriirta in dhallinyarada aan laga qeyb gelin ama aanay helin doorkii ey ku lahaayeen hoowlaha taageerada Soomaaliya uu dalkani u fidiyo. Isla-markaana loo baahan yahay in tix-gelin gaar ah la siiyo maadaama ey yihiin mustaqbalkii dalka iyo cidda isaga kala tarjumi karta labada dhaqanm ee soomaalida iyo kan iswiidhishka.
Caasho: Odeyaashu waddada ha u banneeyaan dhallin-yarada